नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा चर्चित १४ अनुहार (भिडियाेसहित)
काठमाडौं ।निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ( एफएनसीसीआई) को ५४ औं वार्षिक साधारणसभा विहिबारदेखि शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५४ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गरेका हुन् । महासंघको यो साधारणसभाले शनिबार नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । यो साधारण सभाबाट महासंघको विधान अनुसार वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः महासंघको अध्यक्ष बन्दैछन् ।महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले रहेकाले उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि बढी केन्द्रित हुने गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकार पछिको देशव्यापी सञ्जाल रहेकोे सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको संस्था हो । यसले गर्दा पनि महासंघको निर्वाचनलाई सरकार तथा अन्य व्यवसायिक छाता संगठनहरूको समेत धेरै चासो रहेको छ ।महासंघको निर्वाचनमा दुई प्यानल चुनावी मैदानमा रहेका छन् । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि व्यवसायीद्वय चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधानको प्यानल चुनावी मैदानमा रहेका छन् । ढकाल र प्रधान दुबैले आ–आफूले जित्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर निर्वाचनमा कसले बाजी मार्ने भन्ने कुरा निर्वाचन पश्चात मात्रै थाहा हुनेछ । महासंघको ५४ औँ साधारण सभामार्फत चयन हुने नयाँ कार्यसमितिका लागि १२७ जनाले उमेद्वारी दिएका छन् । महासंघको निर्वाचन समितिका अनुसार बरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुसहित कार्यकारिणी समितिका लागि सदस्यहरुको कुल ६४ पदका लागि १२७ जनाको उमेद्वारी परेको हो ।चन्द्र ढकालको प्यानलबाट वस्तुगत उपाध्यक्षतर्फ उमेशलाल श्रेष्ठ, जिल्लानगरतर्फ गुणनिधि तिवारी र एसोसिएटतर्फ रामचन्द्र सांघाईको उमेद्वारी रहेको छ भने किशोर प्रधान प्यानलबाट वस्तुगत उपाध्यक्षतर्फ अञ्जन श्रेष्ठ, जिल्लानगरतर्फ दिनेश श्रेष्ठ र एसोसिएटतर्फ सौरभ ज्योतिको उमेद्वारी रहेको छ । महासंघको निर्वाचनमा एसोसिएटतर्फको १९ पदका लागि ३३ जना, जिल्ला नगरतर्फको कुल १८ पदका लागि ३८ जनाको उमेद्वारी रहेको छ । वस्तुगततर्फको अन्य १४ सदस्य पदका लागि २९ जना र संस्थापक सदस्यबाट ३ जनाको उमेद्वारी रहेको छ । त्यस्तै, महासंघको जिल्लानगरतर्फ कुल १ सय ७ सदस्य रहेका छन् । जसमध्ये प्रदेश १ मा २३, प्रदेश २ मा १२, बागमती प्रदेशमा १६, गण्डकी प्रदेशमा १३, लुम्बिनी प्रदेशमा २२, कर्णाली प्रदेशमा १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० सदस्य तथा संघ संस्था रहेका छन् ।वस्तुगततर्फ १ सय १ सदस्य रहेका छन् भने निर्वाचनमा द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघले पनि मतदान गर्न पाउने छन् । जसमा १२ वटा सदस्यहरु रहेका छन् । यस्तै, एसोसिएटतर्फ पनि ९ सय २३ सदस्य संस्थाहरु रहेका छन् भने निर्वाचनमा संस्थापक सदस्यहरुले पनि मतदान गर्न पाउनेछन् । महासंघमा संस्थापक सदस्य तथा संघ संस्थाहरु १२ रहेका छन् ।महासंघमा अबको नयाँ नेतृत्वका लागि चर्चित अनुहारहरु ﻿ १.शेखर गोल्छा नेपालमा पुख्यौली उद्यम र व्यापारलाई नयाँ धार दिने नयाँ पुस्ता मध्येका एक व्यवसायी हुन शेखर गोल्छा । पुरानो व्यवसायिक विरासतलाई गोल्छाले समालिरहेका छन् । उनी एक सफल व्यवसायी पनि हुन् । गोल्छा देशभरिका उद्योगी र व्यापारीको सबैभन्दा ठूलो छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औं साधारणसभाबाट आगामी तीन वर्षे कार्यकालका लागि शनिबार अध्यक्ष पद सम्माल्दैछन् । तर गोल्छाले निर्वाचनमा भाग लिएका छैनन् किनकी महासंघकाे विधान अनुसार उनी अब स्वत: अध्यक्ष बन्दैछन् । उनी गोल्छा समूहका अध्यक्ष पनि हुन् । उनले उद्योगमा मात्रै नभएर व्यापारमा पनि विविधिकरण गरिरहेका छन् । उनले आर्थिक क्षेत्रका हरेक विषयमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण समेत राख्दै आएका छन् ।२.चन्द्रप्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उमेद्वार बागलुङ जिल्लाको एक सामान्य परिवारमा जन्मिएका चन्द्रप्रसाद ढकाल अहिले मुलुककै सफल उद्योगीका रूपमा चिरपरिचित रहेका छन् । ढकाल आइएमई गु्रपका अध्यक्ष पनि हुन् । उनले ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स, आइएमई लाइफ हाथवे इन्भेस्टमेन्ट, आइएमई कोअपरेटिभ, चन्द्रागिरि हिल्स, आइएमई अटोमोटिभ्स, हिमालय पावर पार्टनर्स, माउन्टेन इनर्जी, शंकर अक्सिजन लगायतका डेढ एक दर्जनभन्दा बढी व्यवसायिक संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।ढकाल उनै व्यक्ति हुन् । नेपालमा पहिलो पटक रेमिटेन्स कम्पनी आइएमईमार्फत औपचारिक रूपमा विप्रेषण भित्र््याएका थिए । ढकाललाई सरकारले सफल व्यवसायीहरुलाई दिने महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्ति (सीआइपी) सम्मान समेत दिएको छ । आफ्नै मेहनत र परिश्रमबाट ‘सेल्फ मेड म्यान’का रूपमा परिचित व्यवसायी ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मंसिर १३ गते अर्थात शनिबार हुने साधारणसभामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा प्यानलसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । ढकालले यस अघिका दुई कार्यकालमा कार्यकारिणी सदस्य हुँदै एशोसिएट उपाध्यक्षको जिम्मेवारी समालिसकेका छन् ।३. किशोर प्रधान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उमेद्वार चर्चित व्यवसायी किशोर प्रधानले महासङ्घको आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उमेदवारी दिएका छन् । उनी चन्द्रप्रसाद ढकालसँग वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चुनाव लड्दैछन् । प्रधानले २८ वर्ष अघिदेखि उद्योग सङ्गठन मोरङको महासचिव हुँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा केन्द्रीय सदस्यको रूपमा प्रवेश गरेका थिए । प्रधानको कंक्रिट उत्पादन गर्ने उद्योग रहेको छ । उनी कंक्रिट उद्योगी पनि हुन् । प्रधान यस अगाडि महासंघको निर्वाचनमा जिल्ला नगर समुहबाट उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए ।४.अन्जन श्रेष्ठ ,वस्तुगत समुहको उपाध्यक्षका उमेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा वस्तुगत समुहका एक प्रत्यासी उमेदवार हुन् व्यवसायी अञ्जनकुमार श्रेष्ठ । श्रेष्ठले प्रधान समूहबाट वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा आफ्नो उमेदवारी दिएका छन् । श्रेष्ठको नाम पनि व्यवसायीहरु माझ लोकप्रिय रहेको छ । श्रेष्ठले यसभन्दा अगाडि पनि महासंघका बसेर काम गरिसकेका छन् । उनी यस अघि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भएर काम गरि सकेका छन् । उनको लगानी उत्पादन, निर्माण, टेडिङ, होटल, जलविद्युत र अस्पतालहरुमा समेत रहेको छ । श्रेष्ठ साल्ट टेडिङ लिमिटेडका संचालक समेत हुन् ।५. उमेशलाल श्रेष्ठ, वस्तुगत समुहको उपाध्यक्षका उमेद्वार उमेशलाल श्रेष्ठको पारिवारिक वातावरण राजनिति हो । तर उनी राजनितीलाई छोडेर उद्योग व्यवसायीक क्षेत्रमा नाम कमाएका एक सफल व्यवसायी हुन् । वाणिज्य महासंघमा रहेर सरकारसँग स्पष्ट रुपमा व्यवसायीक मुद्दा उठाउन सक्ने व्यक्ति पनि हुन् श्रेष्ठ । त्यसैले उनले चन्द्रप्रसाद ढकाल प्यानलबाट महासंघको वस्तुगततर्फ उपाध्यक्ष पदको उमेद्वारी दिएका छन् । यतिबेला महासंघको निर्वाचनमा अन्जन श्रेष्ठ चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । श्रेष्ठ निर्भिक, निडर र सरकारसँग स्पष्ट रुपमा व्यवसायीक आवाज उठाउने शैलीकै कारण मतदाताहरुले उनलाई रुचाउने गरेका छन् । श्रेष्ठ औषधी व्यवसायी हुन् ।६.दिनेश श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्ष पदका उमेद्वार दिनेश श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्षका उमेद्वार किशोर प्रधान प्यानलबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्ष पदमा उमेद्वारी दिएका छन् । उनले विगत लामो समयदेखि जिल्ला नगरका व्यवसायीहरुको नेतृत्व गरिरहेका छन् । श्रेष्ठ पनि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी मानिन्छन् । श्रेष्ठले लामो समयदेखि महासंघमा महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा वस्तुगत संघको तर्फबाट महासंघमा उपाध्यक्षको भूमिकामा पुगेका थिए । अहिले श्रेष्ठले महासंघ नेतृत्व अन्तर्गत बाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष रहेका छन् । त्यस्तै उनले काठमाडौं जिल्लामा समेत उद्योग वाणिज्य संघको आवश्यकता महसुस गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं स्थापना गरेर उक्त संस्थाको अध्यक्षको भूमिका समेत निर्वाह गर्दै आएका छन् । त्यसैले पनि महासंघको निर्वाचनमा उनको नाम चर्चामा रहेको छ ।७.गुणनिधि तिवारी, जिल्लानगर उपाध्यक्ष पदका उमेद्वार गुणनिधि तिवारीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी कार्यकालमा जिल्ला नगर उपाध्यक्षको रूपमा उमेदवारी दिएका छन् । नवलपरासीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनी अहिले महासंघ कार्यकारिणी समितिको सदस्य पनि हुन् । उनले महासंघ जिल्ला तहमा सात वर्ष र केन्द्रमा १५ वर्षदेखि निरन्तर काम गरिसकेका छन् । तिवारीले वरिष्ठ उपाध्यक्षका उमेदवार चन्द्रप्रसाद ढकालको प्यानलबाट उमेद्वारी दिएका हुन् । उनी नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको प्रदेश नम्बर ५ को अध्यक्ष पनि रहेका छन् ।८.सौरभ ज्याति, एसोसिएट समुह उपाध्यक्ष पदका उमेद्वार सौरभ ज्योति चिनाई राख्नु पर्ने नाम होइन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा विगत १२ वर्षदेखि काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् , उनी । उनी नेपाल अटो मोबाइल कम्पनीको छाता संस्था (नाडा) को अध्यक्ष समेत भइसकेका साहसी र प्रष्ट वक्ता समेत हुन् । सौरभ ज्योतिसँग महासंघमा विगत १२ वर्षदेखि विभिन्न विभागको सक्रिय कार्यसमिति सदस्य तथा समितिको सभापति समेत भएर काम गरिसकेको कार्य अनुभव छ । उनी किशोर प्रधान प्यानलमा महासंघको एसोसिएट समुहबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनले चन्द्रप्रसाद ढकाल प्यानलका एसोसिएट समुहका उपाध्यक्ष उमेद्वार रामचन्द्र संघाईसँग चुनावी मैदानमा रहेका छन् । त्यस्तै ज्योतिले नेपालको व्यवसायीक विभिन्न छाता सङगठनहरुको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेका छन् । उनीसँग नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा)को अध्यक्षदेखि नेपालमा १८ वर्षको उद्योग, व्यापार व्यवसायको कार्य अनुभव रहेको छ ।९.रामचन्द्र संघाई, एसोसिएट समुह उपाध्यक्ष पदका उमेद्वार व्यवसायी रामचन्द्र संघाई नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको जारी निर्वाचनमा एसोसिएटतर्फको उपाध्यक्षका उमेदवार हुन् । महासंघमा नयाँ कार्यसमिति छान्न व्यवसायीहरु अहिले चुनावमा होमिएका छन् । संघाईले पनि अब महासंघमा बसेर काम गर्ने इच्छा भएको कारणले महासंघको एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा उमेद्वारी दिएको बताउदै आएका छन् । उनले १५ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिदै आएका छन् ।१०.कृष्णप्रसाद दुलाल : एसोसिएट तर्फ सदस्यका उमेद्वार कृष्णप्रसाद दुलाल महासंघको निर्वाचनमा ओटोमोवाइल्स व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै किशोर प्रधान प्यानलको एसोसिएटतर्फ सौरभ ज्योति समुहबाट सदस्यको उमेद्वार बनेका छन् । दुलाल कलश अटो प्रालि, मेगा लुब्रिकेन्ट, दुलाल ब्रदर्स, पूर्वाञ्चल ल्युब आयल, नेपालीरिका होटल प्रालि तथा सत्कार मेसिनरीमा आवद्ध रहेका छन् । दुलाल वर्तमान नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत हुन् । दुलालले अटोमोबाइल्स क्षेत्रकोे विकास तथा प्रवद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेल्दै आएका छन् । उनले हरेक वर्ष दशैँ अगाडि आयोजना हुने (यस वर्ष भने कोरोनाका कारण नभएको) ‘नाडा अटो शो’ को दुई पटक संयोजक भएर सफल पारिसकेका छन् ।११. शाहिल अग्रवाल : एसोसिएट तर्फ सदस्यका उमेद्वार शाहिल अग्रवाल पनि पायोनियर व्यवसायी हुन् । उनी नेपालको व्यवसायिक घराना शंकर गु्रपका प्रवन्ध निर्देशक हुन् । अग्रवालको स्टिल, सिमेन्ट, खानी, उर्जा, एफएमसीजी, कृषि, टोबाको, स्प्रिट, अटोमोबाइल्स, प्लाष्टिक, टेक्सटाइल, हस्पिटालिटी, रियलस्टेट लगायत अन्य धेरै क्षेत्रमा लगानी रहेको छ । अग्रवालले महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि किशोर प्रधान प्यानलबाट एसोसिएट्तर्फबाट सौरभ ज्योति समुहबाट सदस्यमा उमेद्वारी दिएका छन् । अघि पनि महासंघको कार्यसमितिमा बसेर काम गरिसकेका छन् ।१२.राजेशकुमार अग्रवालः एसोसिएट तर्फ सदस्यका उमेद्वार अग्रवाल परिवारले नेपालको औद्योगिक विकासमा पुर्याएको योगदानको विरासत धान्दै छन् राजेशकुमार अग्रवाल । सिद्धार्थ गु्रप, सिद्धार्थ सिमेन्ट, सिद्धार्थ आयल उद्योग, सिद्धार्थ मिनरल, श्री स्टिल, अर्घाखाँची सिमेण्ट, एक्सन पोलिमार, एसिएन कंक्रिटो जस्ता दर्जन बढी उद्योग र व्यवसायमा रहेका अग्रवाल नीतिगत तहमा उद्योगी र व्यवसायीका समस्या राख्न सक्ने र करोडौँ रुपैयाँ राजश्वमा योगदान गर्ने उद्योगी हुन् । व्यवसायीका असजिला सम्बन्धित निकायमा राख्ने क्रममा उनी आक्रामक पनि हुने गर्दछन् । महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि किशोर प्रधान प्यानलबाट एसोसिएट्तर्फबाट सौरभ ज्योति समुहबाट सदस्यमा उमेद्वारी दिएका छन् ।१३. ज्योत्सना श्रेष्ठः एसोसिएट तर्फ सदस्यका उमेद्वार मेरिगोल्ड ज्वेलर्स, एस.जे.एस. इन्टरनेसनल प्रा.लि, होटल मेची क्राउन झापा, श्री सयपत्री ज्वेलर्स र गजुर ट्रेड इन्टरनेसनल प्रा.लि.को नेतृत्व गरिरहेकी व्यक्ति हुन् ज्योत्सना श्रेष्ठ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा २ कार्यकाल पूरा गरिसकेकी उनी महिला उद्यमीहरुलाई नजिकबाट बुझेकी र उनीहरुका समस्या सम्बन्धित ठाउँमा जबरजस्त ढंगबाट राख्न सक्ने क्षमता भएकी व्यक्ति हुन् । महिलाहरु पनि व्यवसायिक नेतृत्वकर्ता हुन सक्छन् भन्ने दर्बिलो उदाहरण प्रस्तुत गरेकी उनी महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि किशोर प्रधान प्यानलबाट सौरभ ज्योतिको समूहबाट एसोसियट तर्फबाट महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा उमेद्वार छिन् ।१४.आनन्द बगरियाः एसोसिएट तर्फ सदस्यका उमेद्वार आनन्द बगरिया नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीक रुपमा अघि बढाउन महत्व पूर्ण भूमिका खेल्ने सफल व्यवसायी हुुन । बगरिया नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीक बनाउने लक्ष्यका साथ महासंघको ५४ औं साधारणसभाबाट नयाँ नेतृत्व चयनको लागि किशोर प्रधान प्यानलबाट एसोसिएट समुहमा सौरभ ज्यातिसमुहबाट सदस्यको उमेद्वारी दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका अब्बल व्यवसायी रहेका छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएर निम्बस गु्रपलाई देशव्यापी रुपमा विस्तार गरिरहेका बगरिया कृषि मैत्री नीति, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न लागिरहेका छन् । उनले आफ्नै निम्बस गु्रपमार्फत दर्जनाैँ कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार १७:५६
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ( एफएनसीसीआई) को ५४ औं वार्षिक साधारणसभा विहिबारदेखि शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५४ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गरेका हुन् । महासंघको यो साधारणसभाले शनिबार नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । यो साधारण सभाबाट महासंघको विधान अनुसार वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः महासंघको अध्यक्ष बन्दैछन् ।
महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले रहेकाले उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि बढी केन्द्रित हुने गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकार पछिको देशव्यापी सञ्जाल रहेकोे सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको संस्था हो । यसले गर्दा पनि महासंघको निर्वाचनलाई सरकार तथा अन्य व्यवसायिक छाता संगठनहरूको समेत धेरै चासो रहेको छ ।
महासंघको निर्वाचनमा दुई प्यानल चुनावी मैदानमा रहेका छन् । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि व्यवसायीद्वय चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधानको प्यानल चुनावी मैदानमा रहेका छन् । ढकाल र प्रधान दुबैले आ–आफूले जित्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर निर्वाचनमा कसले बाजी मार्ने भन्ने कुरा निर्वाचन पश्चात मात्रै थाहा हुनेछ । महासंघको ५४ औँ साधारण सभामार्फत चयन हुने नयाँ कार्यसमितिका लागि १२७ जनाले उमेद्वारी दिएका छन् । महासंघको निर्वाचन समितिका अनुसार बरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुसहित कार्यकारिणी समितिका लागि सदस्यहरुको कुल ६४ पदका लागि १२७ जनाको उमेद्वारी परेको हो ।
चन्द्र ढकालको प्यानलबाट वस्तुगत उपाध्यक्षतर्फ उमेशलाल श्रेष्ठ, जिल्लानगरतर्फ गुणनिधि तिवारी र एसोसिएटतर्फ रामचन्द्र सांघाईको उमेद्वारी रहेको छ भने किशोर प्रधान प्यानलबाट वस्तुगत उपाध्यक्षतर्फ अञ्जन श्रेष्ठ, जिल्लानगरतर्फ दिनेश श्रेष्ठ र एसोसिएटतर्फ सौरभ ज्योतिको उमेद्वारी रहेको छ । महासंघको निर्वाचनमा एसोसिएटतर्फको १९ पदका लागि ३३ जना, जिल्ला नगरतर्फको कुल १८ पदका लागि ३८ जनाको उमेद्वारी रहेको छ । वस्तुगततर्फको अन्य १४ सदस्य पदका लागि २९ जना र संस्थापक सदस्यबाट ३ जनाको उमेद्वारी रहेको छ । त्यस्तै, महासंघको जिल्लानगरतर्फ कुल १ सय ७ सदस्य रहेका छन् । जसमध्ये प्रदेश १ मा २३, प्रदेश २ मा १२, बागमती प्रदेशमा १६, गण्डकी प्रदेशमा १३, लुम्बिनी प्रदेशमा २२, कर्णाली प्रदेशमा १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० सदस्य तथा संघ संस्था रहेका छन् ।
वस्तुगततर्फ १ सय १ सदस्य रहेका छन् भने निर्वाचनमा द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघले पनि मतदान गर्न पाउने छन् । जसमा १२ वटा सदस्यहरु रहेका छन् । यस्तै, एसोसिएटतर्फ पनि ९ सय २३ सदस्य संस्थाहरु रहेका छन् भने निर्वाचनमा संस्थापक सदस्यहरुले पनि मतदान गर्न पाउनेछन् । महासंघमा संस्थापक सदस्य तथा संघ संस्थाहरु १२ रहेका छन् ।
महासंघमा अबको नयाँ नेतृत्वका लागि चर्चित अनुहारहरु
नेपालमा पुख्यौली उद्यम र व्यापारलाई नयाँ धार दिने नयाँ पुस्ता मध्येका एक व्यवसायी हुन शेखर गोल्छा । पुरानो व्यवसायिक विरासतलाई गोल्छाले समालिरहेका छन् । उनी एक सफल व्यवसायी पनि हुन् । गोल्छा देशभरिका उद्योगी र व्यापारीको सबैभन्दा ठूलो छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औं साधारणसभाबाट आगामी तीन वर्षे कार्यकालका लागि शनिबार अध्यक्ष पद सम्माल्दैछन् । तर गोल्छाले निर्वाचनमा भाग लिएका छैनन् किनकी महासंघकाे विधान अनुसार उनी अब स्वत: अध्यक्ष बन्दैछन् । उनी गोल्छा समूहका अध्यक्ष पनि हुन् । उनले उद्योगमा मात्रै नभएर व्यापारमा पनि विविधिकरण गरिरहेका छन् । उनले आर्थिक क्षेत्रका हरेक विषयमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण समेत राख्दै आएका छन् ।
२.चन्द्रप्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उमेद्वार
बागलुङ जिल्लाको एक सामान्य परिवारमा जन्मिएका चन्द्रप्रसाद ढकाल अहिले मुलुककै सफल उद्योगीका रूपमा चिरपरिचित रहेका छन् । ढकाल आइएमई गु्रपका अध्यक्ष पनि हुन् । उनले ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स, आइएमई लाइफ हाथवे इन्भेस्टमेन्ट, आइएमई कोअपरेटिभ, चन्द्रागिरि हिल्स, आइएमई अटोमोटिभ्स, हिमालय पावर पार्टनर्स, माउन्टेन इनर्जी, शंकर अक्सिजन लगायतका डेढ एक दर्जनभन्दा बढी व्यवसायिक संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
ढकाल उनै व्यक्ति हुन् । नेपालमा पहिलो पटक रेमिटेन्स कम्पनी आइएमईमार्फत औपचारिक रूपमा विप्रेषण भित्र््याएका थिए । ढकाललाई सरकारले सफल व्यवसायीहरुलाई दिने महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्ति (सीआइपी) सम्मान समेत दिएको छ । आफ्नै मेहनत र परिश्रमबाट ‘सेल्फ मेड म्यान’का रूपमा परिचित व्यवसायी ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मंसिर १३ गते अर्थात शनिबार हुने साधारणसभामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा प्यानलसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । ढकालले यस अघिका दुई कार्यकालमा कार्यकारिणी सदस्य हुँदै एशोसिएट उपाध्यक्षको जिम्मेवारी समालिसकेका छन् ।
३. किशोर प्रधान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उमेद्वार
चर्चित व्यवसायी किशोर प्रधानले महासङ्घको आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उमेदवारी दिएका छन् । उनी चन्द्रप्रसाद ढकालसँग वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चुनाव लड्दैछन् । प्रधानले २८ वर्ष अघिदेखि उद्योग सङ्गठन मोरङको महासचिव हुँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा केन्द्रीय सदस्यको रूपमा प्रवेश गरेका थिए । प्रधानको कंक्रिट उत्पादन गर्ने उद्योग रहेको छ । उनी कंक्रिट उद्योगी पनि हुन् । प्रधान यस अगाडि महासंघको निर्वाचनमा जिल्ला नगर समुहबाट उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए ।
४.अन्जन श्रेष्ठ ,वस्तुगत समुहको उपाध्यक्षका उमेद्वार
चुनावी प्रतिस्पर्धामा वस्तुगत समुहका एक प्रत्यासी उमेदवार हुन् व्यवसायी अञ्जनकुमार श्रेष्ठ । श्रेष्ठले प्रधान समूहबाट वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा आफ्नो उमेदवारी दिएका छन् । श्रेष्ठको नाम पनि व्यवसायीहरु माझ लोकप्रिय रहेको छ । श्रेष्ठले यसभन्दा अगाडि पनि महासंघका बसेर काम गरिसकेका छन् । उनी यस अघि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भएर काम गरि सकेका छन् । उनको लगानी उत्पादन, निर्माण, टेडिङ, होटल, जलविद्युत र अस्पतालहरुमा समेत रहेको छ । श्रेष्ठ साल्ट टेडिङ लिमिटेडका संचालक समेत हुन् ।
५. उमेशलाल श्रेष्ठ, वस्तुगत समुहको उपाध्यक्षका उमेद्वार
उमेशलाल श्रेष्ठको पारिवारिक वातावरण राजनिति हो । तर उनी राजनितीलाई छोडेर उद्योग व्यवसायीक क्षेत्रमा नाम कमाएका एक सफल व्यवसायी हुन् । वाणिज्य महासंघमा रहेर सरकारसँग स्पष्ट रुपमा व्यवसायीक मुद्दा उठाउन सक्ने व्यक्ति पनि हुन् श्रेष्ठ । त्यसैले उनले चन्द्रप्रसाद ढकाल प्यानलबाट महासंघको वस्तुगततर्फ उपाध्यक्ष पदको उमेद्वारी दिएका छन् । यतिबेला महासंघको निर्वाचनमा अन्जन श्रेष्ठ चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । श्रेष्ठ निर्भिक, निडर र सरकारसँग स्पष्ट रुपमा व्यवसायीक आवाज उठाउने शैलीकै कारण मतदाताहरुले उनलाई रुचाउने गरेका छन् । श्रेष्ठ औषधी व्यवसायी हुन् ।
६.दिनेश श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्ष पदका उमेद्वार
दिनेश श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्षका उमेद्वार किशोर प्रधान प्यानलबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्ष पदमा उमेद्वारी दिएका छन् । उनले विगत लामो समयदेखि जिल्ला नगरका व्यवसायीहरुको नेतृत्व गरिरहेका छन् । श्रेष्ठ पनि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी मानिन्छन् । श्रेष्ठले लामो समयदेखि महासंघमा महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा वस्तुगत संघको तर्फबाट महासंघमा उपाध्यक्षको भूमिकामा पुगेका थिए । अहिले श्रेष्ठले महासंघ नेतृत्व अन्तर्गत बाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष रहेका छन् । त्यस्तै उनले काठमाडौं जिल्लामा समेत उद्योग वाणिज्य संघको आवश्यकता महसुस गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं स्थापना गरेर उक्त संस्थाको अध्यक्षको भूमिका समेत निर्वाह गर्दै आएका छन् । त्यसैले पनि महासंघको निर्वाचनमा उनको नाम चर्चामा रहेको छ ।
७.गुणनिधि तिवारी, जिल्लानगर उपाध्यक्ष पदका उमेद्वार
गुणनिधि तिवारीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी कार्यकालमा जिल्ला नगर उपाध्यक्षको रूपमा उमेदवारी दिएका छन् । नवलपरासीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनी अहिले महासंघ कार्यकारिणी समितिको सदस्य पनि हुन् । उनले महासंघ जिल्ला तहमा सात वर्ष र केन्द्रमा १५ वर्षदेखि निरन्तर काम गरिसकेका छन् । तिवारीले वरिष्ठ उपाध्यक्षका उमेदवार चन्द्रप्रसाद ढकालको प्यानलबाट उमेद्वारी दिएका हुन् । उनी नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको प्रदेश नम्बर ५ को अध्यक्ष पनि रहेका छन् ।
८.सौरभ ज्याति, एसोसिएट समुह उपाध्यक्ष पदका उमेद्वार
सौरभ ज्योति चिनाई राख्नु पर्ने नाम होइन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा विगत १२ वर्षदेखि काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् , उनी । उनी नेपाल अटो मोबाइल कम्पनीको छाता संस्था (नाडा) को अध्यक्ष समेत भइसकेका साहसी र प्रष्ट वक्ता समेत हुन् । सौरभ ज्योतिसँग महासंघमा विगत १२ वर्षदेखि विभिन्न विभागको सक्रिय कार्यसमिति सदस्य तथा समितिको सभापति समेत भएर काम गरिसकेको कार्य अनुभव छ । उनी किशोर प्रधान प्यानलमा महासंघको एसोसिएट समुहबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनले चन्द्रप्रसाद ढकाल प्यानलका एसोसिएट समुहका उपाध्यक्ष उमेद्वार रामचन्द्र संघाईसँग चुनावी मैदानमा रहेका छन् । त्यस्तै ज्योतिले नेपालको व्यवसायीक विभिन्न छाता सङगठनहरुको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेका छन् । उनीसँग नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा)को अध्यक्षदेखि नेपालमा १८ वर्षको उद्योग, व्यापार व्यवसायको कार्य अनुभव रहेको छ ।
९.रामचन्द्र संघाई, एसोसिएट समुह उपाध्यक्ष पदका उमेद्वार
व्यवसायी रामचन्द्र संघाई नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको जारी निर्वाचनमा एसोसिएटतर्फको उपाध्यक्षका उमेदवार हुन् । महासंघमा नयाँ कार्यसमिति छान्न व्यवसायीहरु अहिले चुनावमा होमिएका छन् । संघाईले पनि अब महासंघमा बसेर काम गर्ने इच्छा भएको कारणले महासंघको एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा उमेद्वारी दिएको बताउदै आएका छन् । उनले १५ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिदै आएका छन् ।
१०.कृष्णप्रसाद दुलाल : एसोसिएट तर्फ सदस्यका उमेद्वार
कृष्णप्रसाद दुलाल महासंघको निर्वाचनमा ओटोमोवाइल्स व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै किशोर प्रधान प्यानलको एसोसिएटतर्फ सौरभ ज्योति समुहबाट सदस्यको उमेद्वार बनेका छन् । दुलाल कलश अटो प्रालि, मेगा लुब्रिकेन्ट, दुलाल ब्रदर्स, पूर्वाञ्चल ल्युब आयल, नेपालीरिका होटल प्रालि तथा सत्कार मेसिनरीमा आवद्ध रहेका छन् । दुलाल वर्तमान नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत हुन् । दुलालले अटोमोबाइल्स क्षेत्रकोे विकास तथा प्रवद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेल्दै आएका छन् । उनले हरेक वर्ष दशैँ अगाडि आयोजना हुने (यस वर्ष भने कोरोनाका कारण नभएको) ‘नाडा अटो शो’ को दुई पटक संयोजक भएर सफल पारिसकेका छन् ।
११. शाहिल अग्रवाल : एसोसिएट तर्फ सदस्यका उमेद्वार
शाहिल अग्रवाल पनि पायोनियर व्यवसायी हुन् । उनी नेपालको व्यवसायिक घराना शंकर गु्रपका प्रवन्ध निर्देशक हुन् । अग्रवालको स्टिल, सिमेन्ट, खानी, उर्जा, एफएमसीजी, कृषि, टोबाको, स्प्रिट, अटोमोबाइल्स, प्लाष्टिक, टेक्सटाइल, हस्पिटालिटी, रियलस्टेट लगायत अन्य धेरै क्षेत्रमा लगानी रहेको छ । अग्रवालले महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि किशोर प्रधान प्यानलबाट एसोसिएट्तर्फबाट सौरभ ज्योति समुहबाट सदस्यमा उमेद्वारी दिएका छन् । अघि पनि महासंघको कार्यसमितिमा बसेर काम गरिसकेका छन् ।
१२.राजेशकुमार अग्रवालः एसोसिएट तर्फ सदस्यका उमेद्वार
अग्रवाल परिवारले नेपालको औद्योगिक विकासमा पुर्याएको योगदानको विरासत धान्दै छन् राजेशकुमार अग्रवाल । सिद्धार्थ गु्रप, सिद्धार्थ सिमेन्ट, सिद्धार्थ आयल उद्योग, सिद्धार्थ मिनरल, श्री स्टिल, अर्घाखाँची सिमेण्ट, एक्सन पोलिमार, एसिएन कंक्रिटो जस्ता दर्जन बढी उद्योग र व्यवसायमा रहेका अग्रवाल नीतिगत तहमा उद्योगी र व्यवसायीका समस्या राख्न सक्ने र करोडौँ रुपैयाँ राजश्वमा योगदान गर्ने उद्योगी हुन् । व्यवसायीका असजिला सम्बन्धित निकायमा राख्ने क्रममा उनी आक्रामक पनि हुने गर्दछन् । महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि किशोर प्रधान प्यानलबाट एसोसिएट्तर्फबाट सौरभ ज्योति समुहबाट सदस्यमा उमेद्वारी दिएका छन् ।
१३. ज्योत्सना श्रेष्ठः एसोसिएट तर्फ सदस्यका उमेद्वार
मेरिगोल्ड ज्वेलर्स, एस.जे.एस. इन्टरनेसनल प्रा.लि, होटल मेची क्राउन झापा, श्री सयपत्री ज्वेलर्स र गजुर ट्रेड इन्टरनेसनल प्रा.लि.को नेतृत्व गरिरहेकी व्यक्ति हुन् ज्योत्सना श्रेष्ठ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा २ कार्यकाल पूरा गरिसकेकी उनी महिला उद्यमीहरुलाई नजिकबाट बुझेकी र उनीहरुका समस्या सम्बन्धित ठाउँमा जबरजस्त ढंगबाट राख्न सक्ने क्षमता भएकी व्यक्ति हुन् । महिलाहरु पनि व्यवसायिक नेतृत्वकर्ता हुन सक्छन् भन्ने दर्बिलो उदाहरण प्रस्तुत गरेकी उनी महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि किशोर प्रधान प्यानलबाट सौरभ ज्योतिको समूहबाट एसोसियट तर्फबाट महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा उमेद्वार छिन् ।
१४.आनन्द बगरियाः एसोसिएट तर्फ सदस्यका उमेद्वार
आनन्द बगरिया नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीक रुपमा अघि बढाउन महत्व पूर्ण भूमिका खेल्ने सफल व्यवसायी हुुन । बगरिया नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीक बनाउने लक्ष्यका साथ महासंघको ५४ औं साधारणसभाबाट नयाँ नेतृत्व चयनको लागि किशोर प्रधान प्यानलबाट एसोसिएट समुहमा सौरभ ज्यातिसमुहबाट सदस्यको उमेद्वारी दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका अब्बल व्यवसायी रहेका छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएर निम्बस गु्रपलाई देशव्यापी रुपमा विस्तार गरिरहेका बगरिया कृषि मैत्री नीति, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न लागिरहेका छन् । उनले आफ्नै निम्बस गु्रपमार्फत दर्जनाैँ कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
५४ औं वार्षिक साधारणसभा
Prevभारतीय विदेश सचिवको नेपालमा २ दिन : के के भयो ? (भिडियोसहित)
गोल्छा र प्रधान समुहको निष्कर्ष : ‘७५ प्रतिशत मतसहित सिङ्गो प्यानल नै निर्वाचित हुन्छौँ’Next
यस्तो रहयो उद्योग बाणिज्य महासंघमा दिनभरिको चुनावी रौनक (फोटोफिचर)
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आज नयाँ नेतृत्व पाउँदै, को को छन् चर्चित अनुहार ? (भिडियोसहित)